Somalia oo wali waa dalka ugu musuqmaasuqa badan dunida
MUQDISHO, Somalia - Somalia ayaa markale safka hore ka gashay dalalka ugu maasuqa badan caalamka, sida ku xusan warbixin ay soo saartey hay'adda kor-joogteysa musuq-maasuqa dunida, ee Transparent International.
Warbixin sanadeedka 2018 ee hay'adda ayaa lagu sheegay in Somalia ay ugu horeyso qiimeynta musuq-maasuq ay ku sameysay 180 wadan oo katirsan caalamka.
Ninka qoray warbixinta Transparent International oo fadhigeedu yahay magaalada Berlin ee dalka Germany ayaa sheegay in musuq-maasuqa uu ku bulaalo/koro meelaha aan isla-xisaabtanka ka jirin.
Somalia oo tan iyo 1991 aan yeelan dowlad awood u la leh la dagaalanka musuq-maasuqa ayaa waxay dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ka galaysay safka hore warbixinta hay'addan, ee xagga musuqa.
Farmaajo ayaa ololihiisii doorashadda kusoo galay inuu la dagaalami doono musuq-maasuqa, laakiin balan-qaadkaasi noqday mid aan hirgelin markii miisaaniyaddii 2018 laga waayay $40 milyan oo dollar.
Waxaa xabsiyo ku yaalla Muqdisho ku xiran mas'uuliyiin sare oo Xukuumadda katirsanaa, iyadoo dhowr wasiir ku xigeenna shaqo joojin loogu sameeyay kadib markii lagu soo eedeeyay musuq-maasuq.
Denmark, New Zealand, Singapore, Sweden and Sweden ayaa noqday shanta dalka ee ugu nadiifsan dhinaca musuq-maasuqa halka Somalia, South Sudan, Yemen, Burundi iyo Equatorial Guinea ayaa kasoo muuqday liiska 10-ka dal ee ugu horeeya musuq-maasuqa.
Wasiir Bayle oo u hanjabay Shirkado diiday bixinta Canshuurta
Soomaliya 14.02.2019. 14:13
Xukuumada oo qarka u saaran inay isticmaasho miisaaniyad KMG ah
Soomaliya 27.12.2018. 11:28